Maxay tahay sababta ay qaar ka mid ah musharaxiinta u raadinayaan xildhibaanimo? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maxay tahay sababta ay qaar ka mid ah musharaxiinta u raadinayaan xildhibaanimo?
Musharaxiinta madaxweyne ayaa ka kooban saddex koox. Kooxda koowaad waa koox ay dhab ka tahay inay u tartamaan xilka madaxweynaha. Kooxda labaad waa musharaxiin ku raadinaya xilal hoose. Halka kooxda saddexaad ay musharaxnimada ku raadinayaa dhaqaale.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mid ah kooxda koowaad ee rajada madaxweyne leh, ayna dhab ka tahay loolanka madaxweeynaha.